Izindaba - Ingabe i-hydroxypropyl methylcellulose iyingozi emzimbeni womuntu? Yini okufanele ngiyinake?
Ingabe i-hydroxypropyl methylcellulose iyingozi emzimbeni womuntu? Yini okufanele nginake?
Ingabe i-hydroxypropyl methylcellulose iyingozi emzimbeni womuntu? Yini okufanele ngiyinake?
I-Hydroxypropyl methylcellulose ayinabungozi emzimbeni womuntu, i-hydroxypropyl methyl cellulose iphephile futhi ayinabuthi, ingasetshenziswa njengesengezo sokudla, ayinakho ukushisa, futhi ayinakho ukucasuka esikhunjeni nasezikhungweni zomzimba ezithintana nazo. Ngokuvamile kubhekwa njengokudla okuphephile nsuku zonke okuvunyelwe kwama-25mg / kg, okokuvikela kufanele kugqokwe ngesikhathi sokuhlinzwa.
Abesifazane abancelisa ibele ngenkathi besebenzisa lo muthi, futhi akukho kusabela okubi okuye kwabikwa ezinganeni. Ngakho-ke, akukho ukuphikisana okukhethekile kwabesifazane abakhulelwe nabancelisayo. Ukusetshenziswa kwe-hypromellose ezinganeni akubangeli ukusabela okungekuhle uma kuqhathaniswa namanye amaqembu wobudala, ngakho-ke izingane zingawusebenzisa lo mkhiqizo ohlelweni olufanayo nabantu abadala.
Izici ze-hydroxypropyl methylcellulose
1. Ukuphakama kwezinga le-polymerization ye-cellulose ether, kukhula isisindo sayo samangqamuzana, futhi kuphakama i-viscosity yesixazululo samanzi.
2. Ukuphakama kokudonswa (noma kokuhlushwa) kwe-cellulose ether, kukhuphuka ukubonwa kwesisombululo sayo samanzi. Kodwa-ke, lalelisisa ekukhetheni umthamo ofanele ngesikhathi sokufaka isicelo ukugwema ukuphuza ngokweqile futhi uthinte umsebenzi wokhonkolo nokhonkolo. isimilo.
3. Njengakwetshezi oluningi, ukubonakala kwesisombululo se-cellulose kuzokwehla ngokushisa okuthe xaxa, futhi okuphezulu kokugcwala kwe-cellulose ether, kukhulu umphumela wamazinga okushisa.
4. Isixazululo se-Hydroxypropyl methylcellulose imvamisa umzimba we-pseudoplastic, onempahla yokuncipha kwe-shear. Lapho likhula izinga lokugunda phakathi kokuhlolwa, kwehlisa ukubonwa. Ngakho-ke, ukuhlangana kodaka kuzoncipha ngenxa yamandla angaphandle, afaneleka ekwakheni udaka, okuholela ekutheni udaka lube nokusebenziseka okuhle nokubumbana.
Isixazululo se-hydroxypropyl methylcellulose sikhombisa izici zamanzi we-Newtonia lapho ukuqoqeka kuphansi kakhulu futhi ukubonwa kuncane. Lapho ukugcotshwa kukhuphuka, isixazululo sibonisa kancane kancane izici zoketshezi lwe-pseudoplastic, futhi lapho likhuphuka kakhulu leli qoqo, kuba sobala kakhulu i-pseudoplasticity.